musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahrain Kuputsa Nhau » Vatongi veMiddle East: Kutungamira ndege muna 2021
Middle East ndege inorema inorova Thierry Antinori, Waleed Waleed Al Alawi, Abdul Wahab Teffaha
Middle East yakaita basa rakakosha mukubhururuka nendege kwenguva yakareba, asi yanga ichingova mumakumi emakore apfuura kuti yakabudirira zvechokwadi. Iri kushandura nzira iyo vanhu vanofamba nayo pasirese, vachigamuchira iyo yakachipa-inodhura shanduko, uye vachigadzirisa iyo kune yavo yega musika zvido.
Middle East nendege zviyero zviri kuunza nyowani nhanho dzenyaradzo, masevhisi, uye zvepamhepo zvinobatsira kune vafambi.
Iyo indasitiri yekuvhiya kutenderera pasirese yakarohwa zvakaomarara neCOVID-19 nezvose zvayakanakisa.
Pamwedzi mishanu yekutanga yegore ra5, huwandu hwesimba hwaive pasi nehafu kutenderedza zvichienzaniswa neyakaitika-denda.
IATA traffic data yaKurume 2021 yakaratidza huwandu hwave pasi 80 muzana zvichienzaniswa naMarch 2019. Kudzoreredza kuri kuitika, uye nyika zhinji dziri kutanga kuvhurika, asi nzira iri kumberi inoramba iri dambudziko.
In rapfuura CAPA - Center yeAviation chiitiko chaicho, Richard Maslen, European Content Edhiyo yeCAPA, akati: "Hazvigone kurambwa kutungamira mune chero chikamu chenhandare yendege muna 2021, 2022, uye kunyangwe zvichienda mberi, ichataridzika zvakanyanya kusiyana nakare kose."
Verenga pa - kana teerera - iyi hurukuro inodzidzisa uye yakakodzera panguva Middle East kubhururuka zvinorema hitters Arab Air Carriers Organisation (AACO) Secretary General Abdul Wahab Teffaha, Qatar Airways Chief Transformation Officer Thiery Antinori, uye Gulf Air Acting CEO Waleed Al Alawi.
Iko kukanganisa kwe COVID-19 kwave kuda kuti ndege dzese dziongorore maitiro avo, vagadzirise uye vagadzirise kune itsva nyika kurongeka. Yedu yenguva dzose yekufunga kwakasimba danho rine mwedzi uno rauya kumabvazuva epakati uye tinofara kuve pamwe naVa Abdul Wahab Teffaha, Secretary General weArab Air Carriers Organisation, VaThiery Antinori, mukuru wezvekutengeserana muQatar airways, uye Mr. Waleed Al Alawi, anoita CEO weGulf Air. Saka ndinofunga zvakakosha kuti titange, kunyatso kuwana nzwisiso yenzvimbo yemuno uye nekurohwa kwayakaitwa neCOVID mumwedzi gumi nesere yapfuura. Saka Mr Abdul Wahab Teffaha, munogona here kungotipa ipfupi sumo yekuti mashopu epakati uye nendege dzeArabhu dzakarohwa sei neCOVID uye mamiriro ezvinhu izvozvi ndeapi?